जिका भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण नेपालमै शुरु, जिका के हो र कसरी सर्छ?
जेठ १८, २०७४ शुक्रवार ०१:४४:०० प्रकाशित
काठमाडौं– समग्र विश्वका लागि तनावको विषय बनिरहेको जिका भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण नेपालमा पनि सुरु भएको छ। लामखुट्टेको टोकाइका कारण सर्ने यो भाइरस मानिसको शरीरमा रहे/नरहेको पत्ता लगाउन गरिने विशेष परीक्षण नेपालका दुई प्रयोगशालामा हुन थालेको हो।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कमलपोखरीस्थित सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक प्रयोगशालामा जिका भाइरसको सफल परीक्षण भइसकेको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १० जनाको र सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिकमा एक जनाको परीक्षण भएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कन्सलट्यान्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट विष्णुप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रयोगशालामा भएका हालसम्मका परीक्षणमा कोहीमा पनि जिकाको संक्रमण देखिएको छैन। ‘प्रयोगशाला परीक्षण सुरु हुनु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर सँगसँगै जिका संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपानाउनु उत्तम हो।’
सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिकका प्रबन्ध निर्देशक रोशन प्रधान श्रेष्ठले अत्याधुनिक प्रविधिबाट परीक्षण सेवा सुरु गरेको बताए। ‘प्रयोगशाला परीक्षण क्षेत्रमा भरपर्दो र विश्वसनीय रियल टाइम पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने।
जिका भाइरस सार्ने लामखुट्टे नेपालमा पनि रहेकाले नेपालमा जिका भाइरस देखिने खतरा अत्यधिक छ। ब्राजिल लगायतका केही दक्षिण अमेरिकी देशमा देखिएको जिका भाइरस हालसालै भारतमा पनि देखिएको पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा जिका भाइरस देखिएपछि नेपालमा थप सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन्। जिका भाइरसले हालसम्म २० भन्दा बढी देशका हजारौँ मानिसलाई संक्रमित गरिसकेको छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार जिका भाइरसको अहिलेसम्म कुनै औषधि र खोप विकास भएको छैन। त्यसैले यस रोगलाई सर्न नदिनु नै एक मात्र विकल्प हो। जिका भाइरसले सबैभन्दा बढी गर्भवतीको कोखमा रहेको भ्रुणलाई आक्रमण गर्छ। कोखमा रहेको भ्रुणमा जिकाको संक्रमण देखिएमा जन्मने शिशु अपांग हुनुका साथै सुस्त मनस्थितिको हुने उनी बताउँछन्।
‘गर्भमा रहेको भ्रुणमा असर गर्ने भएकाले जिका भाइरसले समग्र पुस्तालाई गम्भीर असर पुर्‍याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नवजात बच्चाको स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ। त्यसले उक्त बच्चाको समग्र जीवनसहित देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पुग्छ।’ डा. पुनका अनुसार गर्भमा रहेको भ्रुणमा जिकाको संक्रमण भए बच्चा बौद्धिक अपांग हुने निश्चित जस्तै हुन्छ।
डेँगु प्रजातिकै लामखुट्टेले सार्छ जिका
जिका सार्ने लामखुट्टे र डेँगु सार्ने लामखुट्टे एउटै प्रजातिका हुन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक भीम आचार्यका अनुसार ‘एडिस एजिप्टाई’ नामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट जिका भाइरस सर्छ। यसले गर्भस्थ शिशुको मस्तिष्क विकास रोकिदिन्छ। संक्रमित शिशुको टाउकोको आकार अस्वाभाविक (सानो वा ठूलो) हुने, सुस्त मनस्थितिको हुने वा ज्यानै जाने जोखिमसमेत रहन्छ।
एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टे कालो जिउमा सेता थोप्ला भएको हुन्छ। नेपालमा पनि यो प्रजातिको लामखुट्टे पाइने भएकाले महाशाखाले यसबाट नागरिकलाई जोगाउन कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको डा. आचार्यले जानकारी दिए।
बर्खाको मौसममा पानी जम्ने खाल्डा तथा झाडीहरूमा यो लामखुट्टे बढी पाइन्छ। यसले दिउँसोको समयमा टोक्ने भएकाले पूरा बाउला भएको कपडा लगाउँदा धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ। डा. आचार्यका अनुसार यो लामखुट्टेबाट जोगिन बर्खामा खाल्डाखुल्डी, गाडीका टायर, गमला जस्ता पानी जम्ने ठाउँ वा झाडीको छेउछाउ बस्नु हुँदैन।
जिका भाइरस लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको जीवाणू हो। तर, पछिल्लो समयमा जिका सर्ने माध्यमबारे धेरै विषय बाहिर आउने क्रम जारी छ। विभिन्न अध्ययनले जिका भाइरस रगत, पुरुषको वीर्य, र्‍याल, पसिना तथा पिसाबबाट पनि सर्न सक्ने तथ्यहरु देखाएका छन्। यो भाइरस संक्रमितको वीर्यमा पनि देखापरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यौनसम्पर्कबाट एक महिलालाई यो भाइरस सरेको सार्वजनिक गरेको छ। यो भाइरस शरीरभित्र पसेपछि २–४ दिनमा लक्षणहरू देखापर्न सुरु हुन्छ। तर, २० प्रतिशतमा मात्र यो रोगको लक्षण देखापर्छ।
यो रोगको लक्षणहरूमा मध्यम ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, बिमिरा आउने, मांसपेशी र जोर्नी दुख्ने आदि पर्छन्। करिब दुईदेखि सात दिनमा यो रोग आफैँ ठीक हुन्छ। तर, यो भाइरसले केही मानिसको दिमागमा असर गरेर ‘ग्युलिएनबेरी सिन्ड्रोम’ नामक रोग लाग्न सक्छ।
यो भाइरस पहिलोपटक सन् १९४७ मा युगान्डाको जिका नामको जंगलमा बाँदरहरुमा देखापरेको थियो। विभिन्न अध्ययनअनुसार यो भाइरस मानिसमा भने पहिलो पटक सन् १९५२ मा भेटिएको हो। पछिल्लो समय यो भाइरस ब्राजिलमा सन् २०१५ बाट देखिन सुरु भएको हो। ब्राजिलमा देखिएको जिका भाइरस अहिले अफ्रिका, अमेरिका, एसिया प्रशान्तमा पनि देखिन थालेको छ। चीनमा समेत जिका भाइरस देखिइसकेको छ।